पंक नहुनुहोस्, ह Hun्क हुनुहोस् र तपाईंको सामग्री को हिस्सा दिनुहोस् Martech Zone
त्यो दुर्गन्धमाफ गर्नुहोस्! आशा छ, यो तपाइँको ध्यान भयो। दान Zarrella तपाइँको सामग्री chunking मा एक उत्कृष्ट पोस्ट छ। म उनको सल्लाह को दोहोर्याई छु र मेरो आफ्नै कोहि मा फेंक छ।
वेब विजिटर व्यवहार र उनीहरू कसरी वेब ब्राउजरमा लेखहरू र पृष्ठहरू पढ्छन् र ट्रान्सभर्स गर्छन् भन्ने बारेमा अनुसन्धानको एक विशाल मात्रा भएको छ। वेब आगन्तुकहरूको लागि एक साधारण विधि भनेको डाटा वा हेडलाइटहरू पढ्नु हो भागहरु बरु तल लेख तल पढ्नु भन्दा। व्यक्तिगत रूपमा, मैले आफैलाई यस तरीकाले लेख्न संघर्ष गरें, तर म निरन्तर प्रयास गर्दैछु। हेडिंगको साथ सामग्रीको टुक्रा अलग गर्नु जुन बोल्ड गर्न सकिन्छ, फरक र different्गीन, वा ठूलो आकारको हुन सक्छ तपाईंको आगंतुकलाई तपाईंको सामग्री द्रुत स्क्यान गर्न अनुमति दिनेछ। थप रूपमा, तपाइँको अनुच्छेदहरू छुट्याउनाले प्रयोगकर्ताहरूलाई छिटो स्क्यान गर्न सक्षम गर्दछ, कहिलेकाँही वाक्यांश खोल्दा वाक्य खोल्दा वाक्य बीचमा सबै विवरणहरू पढ्नुको सट्टा।
के तपाईंले त्यो सबै पाउनुभयो?
हुनसक्छ ... हुनसक्छ! तपाई यसमा सिधा उफ्रनु भएको हुन सक्छ भाग। सजिलो नेभिगेसन र समझको लागि निश्चित तरीकामा तपाइँका लेख र पोष्टहरू लेख्नुहोस्:
बोल्ड पाठको प्रयोग गर्नुहोस् - बाहिर खडा, यो छैन?
उपशीर्षकहरू प्रयोग गर्नुहोस् - उपशीर्षकले मान्छेलाई सामग्री द्रुत स्क्यान गर्न अनुमति दिन्छ।
अनुच्छेद स्पेसि Use प्रयोग गर्नुहोस् - स्पेसिingले सामग्री अलग गर्दछ र आगन्तुकहरूलाई छिटो सुरुको वाक्य पढ्न अनुमति दिन्छ।
बुलेटेड र संख्यागत सूची प्रयोग गर्नुहोस् - यो संगठित छ र पढ्न सजिलो छ।
To देखि १० भाग लेख्नुहोस् - दुबै सीमित गर्न कोसिस गर्नुहोस् र तपाईंको सामग्रीमा अनुच्छेदहरू (जस्तै भाग) को संख्यामा लगातार रहनुहोस्। स्थिरताले पाठक प्रतिधारणमा मद्दत गर्दछ किनभने तपाईं पाठकहरूको साथ अपेक्षाहरू सेट गर्दै हुनुहुन्छ।
मैले उद्देश्यको आधारमा यस शीर्षकको पहिलो भागमा भाग लिएन, र यसले देखायो, हैन र? संभावनाहरू यो हुन् कि तपाईंले त्यो पूर्ण अनुच्छेद पढ्नुभएन।
यो केवल ब्लगका लागि मात्र होईन।
म निर्दोष छु जस्तो मा कुनै पनि रूपमा दोषी छु, तर म यसमा कडा परिश्रम गर्न जाँदैछु। तपाईंले पनि गर्नुपर्दछ, यो तपाईंको वेबसाइट वा तपाईंको ब्लग हो, आगंतुकहरूले तपाईंको साइट र यसको लेखहरूको बारेमा अधिक राख्नेछ यदि तपाईं चुप गर्नुहुन्न भने। जब उनीहरूले अधिक सम्झन्छन्, तिनीहरू बढि फर्कन्छन्!
टैग: भागहरुबोधसामग्री chunkingसामग्री ढाँचासामग्री स्क्यानि।डान जररेला
अप्रिल 22, 2007 मा 7: 59 PM
डग, महान सल्लाह, म शीर्ष कार्यकारीहरूमा विषयहरूमा हेडलाइटहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दछ किनभने मलाई थाहा थियो कि तिनीहरू समयमै छोटो छन र मेरो पत्र उनीहरूको समयको लागि योग्य छ भने छिटो निर्णय गर्न सक्छु।